Tanjona ny fandrosoana ara-panahy tsy tapaka amin'ity taona ity
Rehefa manomboka taona vaovao isika, dia tsara ny mieritreritra sahady ny laharam-pahamehana tokony hataontsika amin'ity taona ity eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy. Diniho tsara izy ireo - ary mivavaha mba ho tanteraka amin'ny fiainanao izy rehetra. Hanampy anao anie ny Tompo.
1. Manaova Fiandohana Vaovao: Ao amin'ny Lioka 15, ao amin'ny tantaran'ilay zanaka adala, dia mamaky isika fa ilay raim-pianakaviana dia namoaka ny akanjo tsara indrindra ho an'ny zanany lahy iray izay nandiso fanantenana azy. Izao no hafatry ny filazantsara: Andriamanitra dia manome ny tsara indrindra ho an'ireo izay tsy nahomby. Afaka manao fiandohana vaovao izy ireo, satria tsy mahafoy na iza na iza Andriamanitra. Fampaherezana lehibe ho an'ireo izay tsy nahomby teo aloha izany. Na inona na inona hadisoanao na tsy fahombiazanao, dia afaka manao fiandohana vaovao amin'Andriamanitra ianao dieny izao, rehefa manomboka taona vaovao.
2. Mahaiza mananatra: Hoy i Paoly ao amin'ny 2 Timoty 1:7 : "Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena". Ny Fanahin'Andriamanitra dia manome antsika hery sy fitiavana ny hafa ary mamela antsika hifehy tena. Na inona na inona zavatra niainanao niaraka tamin'ny Fanahy Masina, raha tsy avelanao hananatra anao ny Fanahy Masina - hahatonga anao handany ny fotoananao sy ny volanao eo ambany fifehezany, ary ny fifehezana ny teny lazainao, dia tsy ho tonga tahaka ny itiavan'Andriamanitra anao mihitsy ianao. Ny mpanompon'Andriamanitra lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia lehilahy sy vehivavy izay namela ny Fanahy Masina hifehy ny fiainany. Nofehezina izy ireo teo amin'ny fahazarany natory, teo amin'ny fahazarany nisakafo, tamin'ny vavaka sy ny fianarana ny Soratra Masina. Nofehezina izy ireo tamin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho loha laharana ambonin'ny faniriany rehetra teto an-tany. Kristiana maro no mijanona ho afa-po amin'ny fandraisana ny batisan'ny Fanahy Masina ary mieritreritra izy ireo fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany dia handeha tsara aorian'izany. Mila anarina koa anefa ianao, raha te hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ity taona ity.
3 Mirehitra foana ny afo: Nanana finoana sy fanomezam-pahasoavana ara-panahy i Timoty, nefa nampahatsiahivin'i Paoly an'izany izy: "Tiako ny hampahatsiahivana anao ny fanomezam-pahasoavana noraisinao tamin'ny nametrahako tanana anao." Ny Fanahy Masina dia tsy fanahy saro-kenatra. Nampirisika azy i Paoly mba hanaitra an'io fanomezana io sy hampirehitra azy io indray, mba hirehetan'ny afo. Ianarantsika avy amin'izany fa na dia manao batisa antsika amin'ny Fanahy Masina sy ny afo aza i Jesosy ( Matio 3:11 ), dia mbola tsy maintsy manao zavatra isika mba hirehitra mandrakariva izany afo izany. Andriamanitra mampirehitra ny afo. Tsy maintsy mamatsy solika hatrany isika - fiainana manolo-tena tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Aza alaina sary an-tsaina fa noho ny nanosoran'Andriamanitra anao indray mandeha, dia afaka miala sasatra ianao izao ary miteny hoe: "Rehefa voahosotra, dia voahosotra mandrakariva". Izany dia fahadisoam-panantenana lehibe toy ny filazana hoe: "Raha vao voavonjy, dia voavonjy foana". Nahita olona tena voahosotr'Andriamanitra maty ara-panahy aho, herintaona tatỳ aoriana. Lasa ny afo. Ny tombontsoa sy ny hambom-pon'izao tontolo izao dia niditra ary nanala ny afo. Mihazakazaka mitady vola sy fiainana milamina izy ireo ankehitriny - ary very ny afon'Andriamanitra. Mampalahelo sy fatiantoka lehibe ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Hoy àry i Paoly tamin'i Timoty: "Ilay afo tonga eo aminao, havaozy, ary aoka hirehitra foana. Miankina aminao izany. Raha tsy manafana azy ianao dia ho faty. Ataovy mirehitra izany amin'ny fitazonana ny feon'ny fieritreretana tsara, amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fanetren-tena lalandava, amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, amin'ny fanalavirana ny fitiavam-bola sy ny fifandirana amin'ny hafa ary ny zavatra rehetra izay hamono izany afo izany."
4. Mandrosoa ara-panahy tsy tapaka: Ampirisihina isika mba handroso ho amin'ny fahamatorana, ao amin'ny Hebreo 6:1-3 . Eritrereto ny firosoana amin'ny fahamatorana toy ny fiakarana tendrombohitra (ohatra hoe 10.000 metatra). Efa tonga any an-tampony Jesosy. Rehefa ateraka indray isika dia manomboka eo am-pototr'io tendrombohitra io. Ny tanjontsika dia ny hanaraka an'i Jesosy sy hirosoana hatrany an-tampony, na manao ahoana na manao ahoana izany. Avy eo isika dia afaka miteny amin'ireo rahalahy sy anabavy zandrintsika hoe: "Aoka hanahaka ahy ianareo, dia tahaka ny anahafako an'i Kristy" ( 1 Korintiana 11:1 ), na dia 100 metatra monja aza no ihanihantsika. Ny ara-panahy dia tsy zavatra azo avy amin'ny fihaonana amin'Andriamanitra. Izany dia vokatry ny fisafidianana ny lalan'ny fandavana ny sitrapon'ny tena sy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tsy tapaka isan'andro isan'andro, isan-kerinandro isan-kerinandro ary isan-taona isan-taona. Ny fandavana tsy tapaka ny sitrapony manokana no nahatonga an'i Jesosy ho lehilahy ara-panahy. Ary ny fandavana tsy tapaka ny sitrapontsika no hahatonga antsika ho ara-panahy koa. Ao amin'ny 1 Timoty 4:15 , i Paoly dia mampirisika an'i Timoty mba "Hazoto hihevitra izany zavatra izany". Miezaka mafy ny mpandraharaha iray mba hahazoana vola sy hampiorina tsara ny orinasany. Raha mazoto amin'ny fiainana kristianina ianao, dia hiezaka mafy koa ianao handalina ny Soratra Masina, hikatsaka ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Fanahy ary hanadio ny fiainanao ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra. Ny fandikan-teny iray amin'io andininy io dia mivaky toy izao: "Mifantoha amin'izany". Rehefa variana amin'ireo zavatra ireo ianao dia hiharihary amin'ny rehetra ny fandrosoanao. Aoka isika ho variana amin'i Jesoa Kristy sy ny Teniny mba tsy mahasarika antsika loatra ny fakam-panahin'izao tontolo izao. Ary tsy hanenjika ireo zavatra maro enjehin'ny olon'izao tontolo izao isika. Raha miaina fiainana "mifantoka" toy izany ianao, dia mandroso hatrany. Isan-taona ianao dia ho lasa Kristianina tsara kokoa sy mpanompon'ny Tompo mahomby kokoa.
5. Aoka ho mpandresy: ao amin'ny Hebreo 12:1-3, ampirisihina isika mba hihazakazaka amin'ny faharetana amin'ilay hazakazaka apetraka eo anoloantsika, ka hifantoka amin'i Jesosy, ilay Loharanon'ny finoantsika sy Mpanefa ny finoantsika. Miandrandra Azy isika ary mihazakazaka ity hazakazaka ity. Tsy mijanona isika. Ny hazakazaka amin'ny finoana dia zavatra tsy azonao ijanonana. Fohy ny fotoana ka tsy maintsy mihazakazaka ianao. Raha lavo ianao dia mitsangàna ary tohizo ny fihazakazahana. Maro ireo mpihazakazaka lavo tamin'ny hazakazaka, izay nitsangana, nanohy nihazakazaka ary mbola tonga voalohany. Koa aza kivy raha lavo ianao indraindray amin'ny fiarahanao amin'ny Tompo. Aza mandainga amin'izany. Mitsangàna, miaiky ny fahotanao ary tohizo ny fihazakazahana. Jereo Jesosy izay niaritra ny hazo fijaliana ary nihazakazaka hatramin'ny faran'ny fiainany. Rehefa maro ny fahavalo manohitra anao, dia eritrereto Jesosy Izay nanana fahavalo maro nanohitra Azy (Hebreo 12:3). Tsy mbola nanohitra hatramin'ny fandatsahan-dra tahaka Azy ianareo tamin'ny fiezahana hanohitra ny ota ( Heb 12:4 ). Hitantsika eto fa niady nanohitra ny fahotana i Jesosy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fihetsiny manoloana ny ota dia izao: "Aleoko mandatsaka ny rako toy izay manota". Raha manana toe-tsaina mitovy amin'izany ianao - fa aleonao maty toy izay manota - dia ho mpandresy koa ianao. Rehefa alaim-panahy handainga ianao, raha miteny ianao hoe: "Aleoko maty toy izay mandainga", dia ho mpandresy ianao. Rehefa alaim-panahy hamitaka kely ianao mba hahazoana vola bebe kokoa, raha miteny ianao hoe: "Aleoko maty toy izay hanambaka na dia kely aza", dia ho mpandresy ianao. Rehefa alaim-panahy hitsiriritra vehivavy iray ianao ka miteny hoe: "Aleoko maty toy izay ny filana", dia ho mpandresy ianao. Izany no tsiambaratelon'ny fiainana mandresy.
6. Matokia ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra: "Hitoetra ao amin'ny fitiavany Izy" ao amin'ny Zefania 3:17 dia nadika hoe: "Mikasa mangina ho anao amin'ny fitiavany Izy". Tsapanao ve fa ny zavatra rehetra avelan'Andriamanitra hiditra eo amin'ny fiainanao dia avy amin'ny fo izay mikasa ho anao amim-pitiavana? Ny fitsapana sy ny olana rehetra tonga eo amin'ny fiainanao dia efa nomanina ho amin'ny soa faratampony. Raha mino ny Romana 8:28 ianao, dia tsy hatahotra olona na toe-javatra intsony, mandritra ny androm-piainanao. Tsy hiaina ao anatin'ny tahotra sao ho tratran'ny loza ianao, na ho faty noho ny homamiadana, na haratra am-po amin'ireo fanatika tsy tia Kristianina, na tahotra hafa - satria ny Rainao any an-danitra no mifehy ny zava-drehetra sy ny olona rehetra.
Irinay ny hanananareo taona tena voatahy amin'ny fandrosoana ara-panahy.